Muqdisho July 28, 2013---- Golaha Wasiiradda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kulan gaar ah, kaasoo uu shir gudoominayey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, iyadoo looga dooday qodobo dhowr ah oo ay ka mid aheyd Miisaaniyad gaar ah oo ay soo gudbisay Wasaaradda Maaliyadda.
Kulankan ayaa sidoo kale diirada lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen dardargelinta howlaha Maxkamaddaha iyo Cadaaladda dalka, dhismaha hay’ad qaabilsan Qaxootiga iyo Barkacayaasha iyo qiimeyn lagu sameyn doono hubka sharci darada ah ee ku jira gacanta dadweynaha.
Afhayeenka Xukuumada Mudane Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbaahinta uga warbixiyay kulanka ayaa xusay in kulanka si qotadheer looga hadlay xaaladda amniga isaga oo sheegay in golaha Wasiiradu ay si xoogan u cambaareeyeen falkii fuleynimo ee shalay lagu weeraray xarunta ay deganaayeen shaqaale u dhashay Turkiga halkaasoo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac.
Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in golaha Wasiiradu ay meel mariyeen dhismaha hay’adda Dib-u-dejinta Qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka, waxayna goluhu is tuseen muhiimada ay Qaxootiga iyo Barakacayaasha u leedahay hay’addan, waxaana la filayaa inay ka qeybgalaan howlwadeenada hay’addan shirka ka dhacaya magaalada Nairobi ee looga hadli doono qaabka ugu haboon ee dib loogu celin karo Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha Qaxootiyada.
Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale, meel mariyay Miisaaniyad gaar ah oo uu soo gudbiyay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Mudane Maxamuud Xasan Suleymaan, kaasoo loogu tala galay bixinta mushaaraadka ciidanka iyo howlaha amniga, maadaama ay dawladdu bilowday bixinta mushaaraadka ciidanka kala duwan ee dawladda iyada oo adeegsaneysa Qasnada dawladda.
“Miisaaniyaddan waa mid u gaar ah Mushaaraadka Ciidanka iyo howlaha Amniga, dawladduna waxay xil gaar ah iska saartay sidii ay u joogeynt laheyd xaquuqda Askarta” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo hadlayay intii lagu guda jiray kulanka Golaha.
Golaha ayaa go’aamiyay in la dardargeliyo lana xoojiyo howlaha Maxkamadaha iyo Cadaalada, si talaabo sharciga waafaqsan looga qaado kooxaha nabadiidka ah iyo cid kasta oo ka hor timaada sharciga, gaar ah aana kooxaha nabadiidka ee iyagu caadeystay inay shacabka dhibaateeyaan isla markaana khal khalgeliyaan amniga.
Ra’iisul Wasaaraha oo booqday Xaruntii shaqaalaha Turkida ee la qarxiyay, una tacsiyadeeyey
Muqdisho, July 28, 2013----Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa saaka booqday xaruntii shalay kooxaha nabadiidku ay la beegsadeen qaraxa taasoo ay deganaayeen shaqaale u dhashay dalka Turkiga oo howlo samafal caafimaad ugu fidin jiray shacabka Soomaaliyeed.